ကြာရှည်ခံသော ganache စာရွက် (SUPER EASY) + Sugar Geek Show - Frosting နှင့်အေးခဲခြင်း
ကြာပွတ် ganache ကိုပုံမှန် ganache ယူ။ အလင်းနှင့် fluffy ချောကလက်ချစ်သူများအိပ်မက်သို့လှည့်!
ကြာပွတ် ganache သည်ကြက်ဥနှင့်များသော်လည်းကြက်ဥထည့်စရာမလိုပါ။ ငါမိုးသည်းထန်စွာ, ဆယ်စုနှစ်ပေါ့စေရန်ကြာပွတ် ganache အောင်ကိုချစ် ခွေးရူး ။ ကိတ်မုန့်တစ်ခဲနှောက်ခြင်းအတွက်တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်သည် သငျသညျမှောငျမိုကျသောချောကလက်ကိုသုံးပါကအဖြစ်ကောင်းစွာသကြားဓာတ်အလွန်နိမ့်ပါတယ်။
သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောကျော်လုပ်ဖို့မဒါကြောင့်ကြာပွတ်လျှင်ကြာပွတ် ganache grainy ရနိုင်။
ကြာပွတ် ganache လုပ်နည်း
ကြာပွတ် ganache ပြုလုပ်ခြင်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်! သင့်ရဲ့မုန့်ကိုအပူပေးပြီးချောကလက်ကိုသွန်းလောင်းပြီး ၅ မိနစ်လောက်ထိုင်ပါစေ။ ငါငါးမိနစ်အကြာတွင်သင်သည်သင်၏လှော်ပူးတွဲမှုပူးတွဲပါကချောချောမွေ့မွေ့နှင့်တိုင်အောင်ရောနှောပါစေနိုင်အောင်တစ်ရပ်တည်ချက်ရောနှော၏ပန်းကန်ထဲမှာဒီလိုလုပ်ချင်တယ်။
သင့်ရဲ့ရမ်, ဆား, vanilla ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မြေပဲထောပတ်ကိုက်ညီမှုမှအအေးကြကုန်အံ့။ လှော်ခတ်ခြင်းဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရောနှောခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအအေးမိနိုင်သည်။
ထိုအခါသင်၏ whisk ပူးတွဲမှုပြောင်းပါကအလင်းနှင့် fluffy ရဲ့သည်အထိမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲအဘို့ရိုက်! Soooo ဟာကိတ်မုန့်တွေပေါ်မှာကောင်းတယ်။
decadent ကြာပွတ် ganache လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ iccakes သို့မဟုတ်မက္ကိတ်မုန့်ပေါ်သို့ပိုက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ချိန် -၁၀ မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၁၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:နှစ်ဆယ် မိနစ် ကယ်လိုရီ၆၀kcal
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) ချောကလက်တစ်ဝက် အရည်အသွေးကောင်း၊ အနည်းဆုံး ၆၀% ကိုကိုး
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) မိုးသည်းထန်စွာကြာပွတ်မုန့်
ချောကလက်ကိုချိန်။ လိုအပ်ပါကသေးငယ်သောအပိုင်းအစများခွဲပါ။ တစ် ဦး ရပ်တည်ချက်ရောနှော၏ပန်းကန်ထဲသို့ချထားပါ။
ချောကလက်ကိုမွှေနှောက်ပြီးသုတ်လိမ်းပါ။5မိနစ်ရပ်ကြကုန်အံ့။
လှောင်ကိုပူးတွဲတွဲထားပါ၊ မုန့်နှင့်ချောကလက်ရောစပ်သည်အထိရောနှောရပ်။ မြန်နှုန်း နည်း၍ ရောနှောပါ။
1 Tsp vanilla, ဆားအဖြစ်တော့ထည့်ပါ။ အဆိုပါရောနှောဖို့ whisk ပူးတွဲဖိုင်ကိုပူးတွဲပါ။
အားလုံးပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းသည်အထိအလယ်အလတ်ရောမွှေပါ, ထို့နောက် ganache အလင်းနှင့် fluffy သည်အထိ, ထို့နောက် 2-3 မိနစ်အဘို့အမြင့်မားတဲ့အထိဖွင့်။
ဒီကြာပွတ် ganache ကိတ်မုန့်အဆာ, မယားစကားဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ကိတ်မုန့်အဘို့နှင့်ပိုက်များအတွက်နှင်းခဲအဖြစ်။
ကိတ်မုန့် fondant တူသောအရသာပါဘူး